Phillauri | F4U News
Filmkaan ayaa waxa wada daadihinaya xidigaha kala ah Anushka Sharma iyo waliba Diljit Dosanjh wuxuuna kusocda sheeko aan inaba caadi ahayn taas oo dhinac kasoo shabahda sheekadii filimka Pk ee xidiga Amir Khan iyo waliba isla xidigada filimkan kujidha ee Anushka.
Sheekada filimkaan ayaa kusocota wiil nasiib xun oo dhashay habeenka nasiib xumada kaas oo qoyskiisu ku khasbayaan in uu guursado "Geed" si nasiib xumado uga hadho,Waa run oo waa arin layaab leh lakiin dad ayey dhaqan utahay oo ma ahan wax laiska sameeyey.
Ugu danbeyn waa uu aqbalaya wiilkii nasiibka badna arinti qoyskiisu kula taliyey waxaana maalin maalmaha kamid ah asago "Geedki" uu qabay saaran uu si kadis ah ku arkaya gabar kudhex nool geedka wuxna dadaal badan oo uu sameyn doono kusoo saraya gabadha geedka kudhex nool.
Nasiib xumo laakiin gabadhani mataqaan aduunkan uu ku noolyahay wiilka soosaaray wayna la qabsan wayi doonta waxaana qeybta dambe ee filimku ahaan doonto oo ay kusocon doonta sidii uu wiilkan nasiibka xun gabadhan uu ugu celin laha meeshi uu awal kasoo saaray ee ahayd aduunkeeda rasmiga ah.
Filimkaan ayaa waxaa soo saaay Anushka Sharma, Karnesh Sharma waxaana dhinaca muusiga gacan ka geystay Songs: Shashwat Sachdev iyo Jasleen Royal Background-Score: Sameer Uddin.Waxaa maal geliyey shirkadaha kala ah Fox Star Studios iyo waliba Clean Slate Films.
Filimka ayaa waxaa kaloo kujira oo doorkooda jilaanimo ka qaadanaya xidigaha kala ah:
Heesaha filimka kujira ayaa gaaraya ilaa 8deed heesood oo aad iyo aad u macaan waxayna kala yihiin:
Release Date:2017, March 24Genre:Drama, FantasyActors:Anushka Sharma, Diljit DosanjhDirector:Anshai Lal